" အသက်၇၆နှစ်ရောက်နေပေမယ့်ဘဝကိုအရှူံးမပေးဘဲရေခဲချောင်းရောင်းကာ စားဝတ်နေရေးရုန်းကန်နေရတဲ့အဘွားအိုကို တစ်သိန်း ကျပ် လှူဒါန်းကူညီခဲ့တဲ့မိုးစက်'' - Cele Gabar
” အသက်၇၆နှစ်ရောက်နေပေမယ့်ဘဝကိုအရှူံးမပေးဘဲရေခဲချောင်းရောင်းကာ စားဝတ်နေရေးရုန်းကန်နေရတဲ့အဘွားအိုကို တစ်သိန်း ကျပ် လှူဒါန်းကူညီခဲ့တဲ့မိုးစက်”
Koe | January 7, 2022 | Cele Lifestyle | No Comments
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာတော့ လူရွှင်တော်မိုးစက်ဟာသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အလှူသတင်းကို မြင်သူတိုင်းပီတိဖြစ်စေရန်တင်လာခဲ့တာပါ။အကြောင်းကတော့အသက် (၇၆) အရွယ်ရောက်နေတဲ့အပြင်ခါးလေးတွေ ကုန်းပြီးလမ်းလျှောက်တာတုန်ရီနေပေမယ့်ဇွဲမလျော့ဘဲ စျေးရောင်းနေတဲ့ အဖွားဒေါ်တင်ရီ ကို လှူဒါန်းမျုပြုလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
တစ်နေ့ လုံးရောင်းမှ ၂၅၀၀ ဘဲ မြတ်တာပါ စျေး မဆစ်ပါနဲ့နော်…””ဒီ ၁၅ ထုပ်ကို သားအကုန်ယူမှာလေ နည်းနည်းတော့ လျော့ပေးပါဦး..”” အဖွား တကယ်လျော့မရတော့လို့ပါ…”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ အဖွား…ဒီမှာ ပိုက်ဆံ…”သား ပိုက်ဆံတွေက အများကြီးဘဲ…အဲ့ဒါ ၁၅၀၀ မဟုတ်ဖူးလား…”မဟုတ်ပါဘူး..ဒါ ၅၀၀ တန် တွေလား..???..အဖွားသေချာလေးကြည့်ပါဦး…”
“တစ်သောင်းတန်တွေ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10… ၁၀ရွက်တောင်..ဟီး…ရော့….”ဟာ..မဟုတ်ဘူးလေ အဖွားကို အကုန်လုံးကန်တော့တာ..”တကယ်လားဝမ်းသာလိုက်တာ…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရယ်…”ဒါဆို ဒီရေခဲထုပ်တွေက …”သားစားရင် စား ၊ မစားရင် ဒီနားကလူတွဝေလိုက်တော့လေ…ဟုတ်ပြီဗျာ…ကဲ ပျော်ရဲ့လား အဖွား…”ပျော်တာပေါ့ သားရယ်..
တစ်နေ့ လုံးရောင်းမှ ၂၅၀၀ လောက်ဘဲရတာလေအခုက တစ်သိန်းကြီးများတောင်ဆိုတော့
အဖွားအရမ်းပျော်တာပေါ့..”အသက် (၇၆) အရွယ်ရောက်နေတဲ့အပြင်ခါးလေးတွေ ကုန်းပြီး
လမ်းလျှောက်တာတုန်ရီနေပေမယ့်ဇွဲမလျော့ဘဲ စျေးရောင်းနေတဲ့ အဖွားဒေါ်တင်ရီ ကို လှူလိုက်ရတဲ့တစ်သိန်း ကျပ် ဟာ အားလုံးရင်ထဲမှာကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
တောင်ဒဂုံ (၁၀၄) ရပ်ကွက် ရောက်ရင်လဲအဖွားဒေါ်တင်ရီ ရဲ့ ရေခဲထုပ်လေးတွေကို
အားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာ။ဒီလို သက်ကြီးရွယ်အိုများတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာ
လှူခွင့်ရအောင် ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်လှူဒါန်းကျတဲ့ အလှူရှင်များအားလုံး
ကျန်းမာချမ်းသာလန်းဖြာကြပါစေ ။🙏🙏🙏”’ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ကြည်နူးစရာလှူဒါန်းမှုပုံရိပ်ကိုဖော်ပြခဲ့တာပါ။မွန်မြတ်လှတဲ့မိုးစက်ရဲ့ကုသိုလ်အတွက် သာဓုခေါ်ခဲ့ပါဦးCeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ။
” အသက္၇၆ႏွစ္ေရာက္ေနေပမယ့္ဘဝကိုအရႉံးမေပးဘဲေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းကာ စားဝတ္ေနေရး႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အဘြားအိုကို တစ္သိန္း က်ပ္ လႉဒါန္းကူညီခဲ့တဲ့မိုးစက္”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔မွာေတာ့ လူ႐ႊင္ေတာ္မိုးစက္ဟာသူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့အလႉသတင္းကို ျမင္သူတိုင္းပီတိျဖစ္ေစရန္တင္လာခဲ့တာပါ။အေၾကာင္းကေတာ့အသက္ (၇၆) အ႐ြယ္ေရာက္ေနတဲ့အျပင္ခါးေလးေတြ ကုန္းၿပီး
လမ္းေလွ်ာက္တာတုန္ရီေနေပမယ့္ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲ ေစ်းေရာင္းေနတဲ့ အဖြားေဒၚတင္ရီ ကို လႉဒါန္းမ်ဳျပဳလုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
တစ္ေန႔ လုံးေရာင္းမွ ၂၅၀၀ ဘဲ ျမတ္တာပါ ေစ်း မဆစ္ပါနဲ႔ေနာ္…””ဒီ ၁၅ ထုပ္ကို သားအကုန္ယူမွာေလ နည္းနည္းေတာ့ ေလ်ာ့ေပးပါဦး..”” အဖြား တကယ္ေလ်ာ့မရေတာ့လို႔ပါ…”
“ဟုတ္ကဲ့ပါ အဖြား…ဒီမွာ ပိုက္ဆံ…”သား ပိုက္ဆံေတြက အမ်ားႀကီးဘဲ…အဲ့ဒါ ၁၅၀၀ မဟုတ္ဖူးလား…”မဟုတ္ပါဘူး..ဒါ ၅၀၀ တန္ ေတြလား..???..အဖြားေသခ်ာေလးၾကည့္ပါဦး…”
“တစ္ေသာင္းတန္ေတြ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10… ၁၀႐ြက္ေတာင္..ဟီး…ေရာ့….”ဟာ..မဟုတ္ဘူးေလ အဖြားကို အကုန္လုံးကန္ေတာ့တာ..”တကယ္လားဝမ္းသာလိုက္တာ…
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္သားရယ္…”ဒါဆို ဒီေရခဲထုပ္ေတြက …”သားစားရင္ စား ၊ မစားရင္ ဒီနားကလူတြေဝလိုက္ေတာ့ေလ…ဟုတ္ၿပီဗ်ာ…ကဲ ေပ်ာ္ရဲ႕လား အဖြား…”ေပ်ာ္တာေပါ့ သားရယ္..
တစ္ေန႔ လုံးေရာင္းမွ ၂၅၀၀ ေလာက္ဘဲရတာေလအခုက တစ္သိန္းႀကီးမ်ားေတာင္ဆိုေတာ့
အဖြားအရမ္းေပ်ာ္တာေပါ့..”အသက္ (၇၆) အ႐ြယ္ေရာက္ေနတဲ့အျပင္ခါးေလးေတြ ကုန္းၿပီး
လမ္းေလွ်ာက္တာတုန္ရီေနေပမယ့္ဇြဲမေလ်ာ့ဘဲ ေစ်းေရာင္းေနတဲ့ အဖြားေဒၚတင္ရီ ကို လႉလိုက္ရတဲ့တစ္သိန္း က်ပ္ ဟာ အားလုံးရင္ထဲမွာ
ေတာင္ဒဂုံ (၁၀၄) ရပ္ကြက္ ေရာက္ရင္လဲအဖြားေဒၚတင္ရီ ရဲ႕ ေရခဲထုပ္ေလးေတြကို
အားေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္ဗ်ာ။ဒီလို သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေတြ႕ျမင္တဲ့အခါမွာ
လႉခြင့္ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူပါဝင္လႉဒါန္းက်တဲ့ အလႉရွင္မ်ားအားလုံး
က်န္းမာခ်မ္းသာလန္းျဖာၾကပါေစ ။🙏🙏🙏”’ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ၾကည္ႏူးစရာလႉဒါန္းမႈပုံရိပ္ကိုေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။မြန္ျမတ္လွတဲ့မိုးစက္ရဲ႕ကုသိုလ္အတြက္ သာဓုေခၚခဲ့ပါဦးCeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ။
” နယ်ဘက်မှ မွေးရာပါ သွေးရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ သမီးလေး ‘ဆေးရုံတက်ဘို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့် အလှူငွေ (၂) သိန်း စတင်လှူဒါန်းပေးပြီး ဆေးရုံတင်ပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ”
“အရွယ်ရောက်လာတဲ့ သားနဲ့သမီးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးဘဝအရွယ်လေးတွေပြန်ရောက်စေချင်တယ်လို့ ချစ်မဝစွာပြောပြလာတဲ့မင်းသမီးကြီးမေဝင်းမောင်”